Izithakazelo ZakwaRadebe/Hadebe – The Ulwazi Programme
EsiZulwini into iyanconywa, lokhu ngenye yezindlela abantu baKwaZulu abakhule beyazisa. Ukuncoma noma ukubonga kukhonjiswa ngezindlela eziningi njengokuthakazelela lowo. Ukudlodlobala kwesizwe samaZulu kuhlanganisa izimpi ezazibakhona lapho babehlasela khona ezinye izizwe bese zingena ngaphansi kwabo noma uma umfana ekwaluseni akwazi ukusindisa imfuyo esilwaneni ebesiyihlasela lokho obekukhomba ubuqhawe. Lesisenzo bekuyaye sidume endaweni yonke kuthi izimbongi zimhashe lowo osuke enze okuhle. Lena kwakungenye yezindlela ekwaqambeka ngazo izithakazelo zabantu.
Mashwabada inkomo nempondo zayo,
Izinzipho zimnyama ngokuqhwayana,
Kubantu ababenegalelo elihle emlandweni waseNingizimu Afrika bakwaRadebe singabala umdlali webhola owazakhela udumo ngokuba ukaputeni weqembu leBafana Bafana uLucas Radebe, uNgqongqoshe WezoBulungiswa kuzwelonke uJeff Radebe kanye noMeshack Radebe onguNgqongqoshe Wesokuthuthukiswa Komphakathi esifundazweni saKwaZulu Natal.
3 thoughts on “Izithakazelo ZakwaRadebe/Hadebe”
Motapo We Zi'Gidi
Thina asibona abakwaZulu. SingamaHlubi
Thina siyisizukulu sika Langa libalele okwakungu khokho wethu owehlula abezizwe ngamakambi endaweni yase mtshezi okuyi escort e kzn.